Goiana: Akon Indray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2018 11:37 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, 繁體中文, 简体中文, Español, English
FANAVAOZANA: Namoaka lahatsary iray maharitraritra ny orinasa mpanao dokambarotr'i Akon, mikasika ny zava-tranga izay, raha ny voalazandry zareo, dia manaporofo ny tsy fananany tsiny.
Nanao ny fanaony indray i Akon – namorona resabe tao Karaiba. Tamin'ity indray mitoraka ity, i Goiana no toerana nosafidiany. Nandritra ny kaonseritra tao amin'ny Kianja Nasionaly ao Goiana izay anisan'ireo fety Carifesta fankalazàn'ny faritra, teo am-panivatsivàna ireo vahoaka marobe mpankafy azy ilay mpihira hip-hop, làlany hiakatra eny an-tsehatra fakàna sary teo anivon'ireo mpanatrika. Mpankafy ireo fety fankalazana sasantsasany no efa tonga talohany ary toa ohatran'ny nisy fifandirana kely nandritra ny fikasàn'i Akon hiakatra ny sehatra. Raha vantany vao azony ny sehatra, nofelahany tehamaina mafimafy toa ampy nampivembena azy ny iray tamin'ireo vehivavy.
Lahatsary mikasika ilay zava-nitranga no mameno ny aterineto ary ireo blaogera Goiane no nandika an'ity fisafoakan'i Akon ity ho toy ny fampisehoana ny tsy fitiavana mifangaro aman'olona ananan'ilay mpihira. Anontanian'ny Living Guyana ny antony mahatonga ireo media lehibe ao amin'ny firenena tsy maneho hevitra mikasika ilay tranga tao anatin'ny fandrakofan-dry zareo an'ilay kaonseritra.
Tao anatin'ireo fanadihadiana rehetra tao an-toerana mikasika io kaonseritra io, nahoana (izy ireo) no tsy nitatitra fa i Akon dia nampiasa herisetra tamina vehivavy roa teo imason'ireo vahoaka Goiane an'arivony?
Malaza amin'ny fampiasan-kery amin'ny olona amin'ny endrika maro samihafa i Akon. Nanao firaisana tamina zazavavikely vao dimy ambinifolo taona izy tao Trinidad ary nanipy ankizilahy kely avy eny ambony sehatra tao Etazonia. Mazava fa tena adala io lehilahy io ary mendrika ny ho hidiana (toa mahazatra ve?) mba hiarovana azy tsy hanohy ny fanafihany ny olona tsy manantsiny.
Vao mainka misafoaka izy raha mahafantatra hoe ohatrinona no karaman'i Akon tamin'ilay fampisehoany, amin'ny filazàna azy io hoe “felaka 160 000 dolara amerikàna teny amin'ny tavan'ireo vehivavy Goiane”:
Ohatra iray hafa amina karazana fijery izay mamparary ireo Goiane ity raharaha Akon ity, ary ny marina, leferiny amim-pahasambarana. Jereo fotsiny fa olona 20 000 no teo ary tsy nisy olona nijoro nanohitra an'io fotoana nanararaotana an'ilay vehivavy Goiane io. Afaka niaro an'io vehivavy io avokoa ny olona rehetra manana fotokevitra ijoroana.
Fanabarabaràna io. Miantso ny Ministra Rohee izahay mba hanameloka an'i Akon ary hanakana azy tsy hiditra ao Goiana indray. Na iza na iza io vehivavy io, mila mpisolovava mahay izy ary mitory an'io adala io.
Zavatra mahatalanjona, manome tsiny tsotra izao fotsiny an'ireo vehivavy ny Guyana911
Vao haingana, raha iny nikasa ny hiakatra teo ambony sehatra iny ireto mpanao hatsikana roa… voatosika izy ireo. Tsy mampiato kaonseritra na hetsika nasionaly iray tahaka izany ianareo. Matetika rehefa mitranga izany, ilaina ny fampiasana hery mba handaminana ny raharaha.
Raha te hiakatra eo ambony sehatra ireo jokera roa, inona no hataon'i Akon? Mijoro sy mitazona fanamafisam-peo sady mijery azy ireo fotsiny? Na heverina hanao fampisehoana izy ka hinia tsy hiraharaha azy ireo rehefa asehon'ireo ny malotony.
Tokony omeny ny daka vody ry zareo. Ampianariny mifehy tena izy ireo.. Fantatry ny rehetra fa halan'i Akon, ary tsy anomezan-tsiny azy, ny vehivavy mampiseho vody.
Tsy hitako hoe amin'ny ahoana no mahadiso ny nataon'i Akon.
Na ahoana na ahoana, heverin'ny Signifyin’ Guyana fa misy olana goavana manodidina an'io:
Iray tamin'ireo tranga tena nahatezitra ahy, hitako nandritra ny Carifesta dia zavatra tena goavana noho ny tsy fananany fihandronan-tsaina (mihaotra loha foana aho mikasika ny mampitombina ny hetsika sasantsasany, ohatra), nefa ny fisian'i Akon etsy ankilany, ny tena olana goavana amiko amin'io dia ny tsy fisiana fampidirana ireo feo tanora kokoa ao anatin'ireo adihevitra mikasika ny fepetra ao amin'ny faritra Karaiba.